सुदूर उत्तर क्षेत्रमा बाइबलको सन्देश
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको ईवी उङ्गाबेरे उन्डुबेली (जिम्बावे) उर्दू एफिक एस्टोनियन ओरोमो काजाक किन्यारवान्डा किरून्डी किर्गिज कोंगो कोरियन क्याटालान क्रोएसियन क्षोसा गा गालिसियन ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक चिचेवा चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जापटेक (इस्मस) जापानी जुलू झेल्तल टगालोग टर्किश टिग्रिन्या टिभ टोंगन डच डेनिश ताङ्काराना ताजिकी तारास्कान ताहिटी तेलगु नर्वेली नाह्वाटल (वास्टेका) नाह्वाटल (सेन्ट्रल) नेपाली पंजाबी पारसी पोर्चुगिज पोर्चुगिज (पोर्चुगल) पोलिश फान्टे फिनिश फ्रान्सेली बास्क बिस्लामा भलेन्सियन भेजो मले मल्यालम माम मालागासी युक्रेनियन योरूबा रूसी रोमानियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ वेल्श शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) सिंहला सोट्सेल स्पेनिश स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिब्रू हौसा
बाइबलको सन्देश—सुदूर उत्तर क्षेत्रमा
सन्‌ २०१४ मा यहोवाका साक्षीहरूको परिचालक निकायले एउटा नयाँ योजना बनायो। त्यो हो, युरोप र अमेरिकाको दुर्गम उत्तरी इलाकामा बाइबलको सन्देश सुनाउने। (प्रेषित १:८) यस योजनाअनुसार सुरुमा अमेरिकाको अलास्का, फिनल्याण्डको ल्यापल्याण्ड अनि क्यानाडामा पर्ने नुनाभुट र उत्तर-पश्‍चिम इलाकाको केही भागमा प्रचार गर्नुपर्ने थियो।
यहोवाका साक्षीहरूले दशकौंअघिदेखि यी इलाकाहरूमा प्रचार गर्दै छन्‌। तिनीहरू छोटो समयको लागि त्यहाँ जान्थे र बाइबलमा आधारित प्रकाशनहरू वितरण गर्थे। त्यसैले तिनीहरूले त्यहाँका मानिसहरूलाई खासै मदत गर्न सकेका थिएनन्‌।
यस योजनाअनुसार यहोवाका साक्षीहरूको शाखा कार्यालयले त्यहाँ पूर्ण-समय सेवकहरू (जसलाई अग्रगामी सेवक भनिन्छ) खटायो। तिनीहरूलाई त्यहाँ कम्तीमा पनि तीन महिना सेवा गर्न आग्रह गरियो। यदि त्यहाँ बाइबल अध्ययन गर्न चाहने मानिसहरू धेरै छन्‌ भने त्योभन्दा अझ लामो समय बस्न सक्थे अनि सभा पनि सञ्चालन गर्न सक्थे।
सुदूर उत्तर क्षेत्रमा सेवा गर्दा विभिन्न चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ। अलास्काको ब्यारोमा दुई जना अग्रगामी सेवक खटाइएको थियो। ती अग्रगामी सेवकमध्ये एक जना दक्षिणी क्यालिफोर्नियामा बस्थे भने अर्कोचाहिं अमेरिकाको जर्जियामा। ब्यारो गएको पहिलो वर्षमा तिनीहरूले मुटु कमाउने जाडो सहनुपऱ्यो। त्यहाँको तापक्रम -३८ डिग्री सेल्सियसभन्दा तल झरेको थियो। तैपनि तिनीहरूले केही महिनाभित्रै त्यस सहरको ९५ प्रतिशत घरमा प्रचार गरी सिद्धाए। तिनीहरूले चारवटा बाइबल अध्ययन सुरु गरे। तिनीहरूमध्ये एक जना जोन थिए। जोन र उनका प्रेमिका बाइबलले वास्तवमा के सिकाउँछ? किताबबाट अध्ययन गर्दै छन्‌। उनी सिकेको कुरा आफ्ना साथीभाइ र सहकर्मीहरूलाई बताउने गर्छन्‌। त्यति मात्र होइन, उनी JW लाइब्रेरी एप चलाएर दिनहुँ धर्मशास्त्र जाँच्ने पुस्तिका आफ्नो मोबाइलबाट पढ्‌छन्‌।
क्यानाडाको नुनाभुट इलाकाको राङ्‌कन इनलेट भन्ने ठाउँमा बाटोघाटोको सुविधा छैन। त्यसैले दुई जना अग्रगामी सेवक हवाईजहाजबाट त्यस सानो गाउँमा पुगे। उनीहरूले त्यहाँ थुप्रै बाइबल अध्ययन सुरु गरे। एक जना व्यक्तिले राज्यभवनमा के-कस्ता कार्यक्रमहरू हुन्छन्‌? भन्ने भिडियो हेरेपछि ‘यहाँचाहिं कहिले राज्यभवन बनाउनुहुन्छ नि?’ भनेर सोधे। तिनले अझ यसो भने, “राज्यभवन बनेपछि म सभामा पक्कै आउँछु।”
केही अग्रगामी सेवक फिनल्याण्डको साभुकोस्के भन्ने ठाउँमा सेवा गरिरहेका छन्‌। तिनीहरू भन्छन्‌, “यो ठाउँमा असाध्यै जाडो छ, हिउँ पनि धेरै पर्छ।” त्यहाँ मानिसहरूको तुलनामा १० गुणा बढी हिममृग पाइन्छ। ती अग्रगामी सेवकहरू त्यहाँ उपयुक्त समयमा पुगेको बताउँछन्‌। किन? तिनीहरू भन्छन्‌, “गाउँको र दुर्गम इलाकाको बाटोमा जम्मा भएको हिउँ हटाइन्छ र राम्रो अवस्थामा राखिन्छ। अनि असाध्यै जाडो भएकोले मानिसहरू घरमै हुन्थे। त्यसैले हामीले पूरै इलाका ढाक्न सक्यौं।”
हामीले सुदूर उत्तर क्षेत्रमा बाइबलको सन्देश सुनाउन गरेको प्रयासले मानिसहरूको ध्यान खिचेको छ। दुई जना अग्रगामी सेवकले अलास्काको एउटा सहरको मेयरलाई प्रचार गरे। तिनलाई बाइबलको कुरा धेरै मन पऱ्यो। तिनले आफूबीच भएको कुराकानी सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिन्‌। परमेश्वरको राज्य के हो? भन्ने पर्चाको फोटो पनि त्यस साइटमा राखिन्‌।
अलास्काको हेन्ज भन्ने ठाउँमा दुई जना अग्रगामी सेवकले एउटा पुस्तकालयमा सभा सञ्चालन गरे। त्यस सभामा आठ जना मानिस आए। एउटा स्थानीय समाचारपत्रमा टेक्सस र उत्तर क्यारोलिनाबाट दुई जना मानिस आएका छन्‌ भनेर छापिएको थियो। तिनीहरूले हरेकलाई घरमै बाइबल अध्ययन गराउँछन्‌ भनेर पनि लेखिएको थियो। अन्तमा यस्तो लेखिएको थियो, “अझ धेरै बुझ्न चाहनुहुन्छ भने jw.org मा जानुहोस्।”
यहोवाका साक्षीहरूको सभाहरूमा कस्ता कार्यक्रम हुन्छन्‌?